Invengo XC2901-FUF Handheld လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Reader ကို, Invengo XC2901-FUF Handheld Reader, Invengo XC2901-FUF Reader, XC2901-FUF UHF Reader
Invengo XC2901-FUF Handheld လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Reader ကို
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Reader ကို Invengo XC2901-FUF Handheld Reader, Invengo XC2901-FUF Handheld လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Reader ကို, Invengo XC2901-FUF Reader, XC2901-FUF UHF Reader
performance parameters တွေကို
processor ကို: Intel က PXA 270 520MHz
သိုလှောင်ခြင်း: 128ကို MB ROM ကိုနှင့် 64MB RAM ကို
ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်: Windows ကို CE5.0
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ parameters တွေကို
ရှုထောင့်: 165မီလီမီတာ× 76mm × 59mm
အလေးချိန်: 0.46ကီလိုဂရမ် (configuration ကိုမှီခို)
ဘက်ထရီ: အားပြန်သွင်းနိုင်လီသီယမ်ဘက်ထရီ, ပိုပြီး 3000mAh / 3.7V ထက်
သငျ့လျြောအောငျပွုပွငျသောစကျ: input 50-60Hz, AC အ, 100V ကို ~ 240V output ကို, DC 5V / 1.5A, လက်ရှိ 1.5A အားသွင်းအများဆုံး
အချိန်အားသွင်း: ≯4နာရီ, လက်ရှိ 1.5A ကောက်ခံ
operating နာရီ: ≮8နာရီ, ဖတ်ပြီးသားကြားကာလ 10 စက္ကန့်
standby အချိန်: ≮120နာရီ
လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေ: Real-time monitoring ဘက်ထရီဗို့, ကျန်ရှိသောတန်ခိုးတော်နှင့်အားသွင်း status ကို
ပါဝါစားသုံးမှု: 8W ထက်လျော့နည်း
ဖွံ့ဖြိုးရေးပတ်ဝန်းကျင်: HTML ကို, XML ကို
software development kit: .net ကို Compact မူဘောင် 2.0, ကို C # (.Net ကမူဘောင်ဘာသာစကား managed), စံ Windows ကိုအီး application ကိုအင်တာဖေ့စ protocol ကို
ထပ်တူဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းဆော့ဖျဝဲ: Microsoft က Active ကို Sync ကို
demo အစီအစဉ်ကို: RFID, ဘားကုဒ်ကို, IC ကဒ်, ပုံနှိပ်, GPRS, Wi-Fi ကိုစသည်တို့ကို.
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF-RFID module တစ်ခု
စံထောက်ခံ: EPCglobal အတန်းအစား 1 Gen2 & ISO ကို 18000-6C
operating အကြိမ်ရေ: 920-925MHz
output power: မက်စ် 27dbm, သင့်အောင်လုပ်နိုင်သော
အကွာအဝေးကိုဖတ်ပါ: 0-2.5မီတာ (configuration ကိုမှီခို)
Tag ကိုမှတ်ဉာဏ်ထောက်ခံ: အများဆုံး 62 EPC bytes; အများဆုံး 16 TIME က bytes; အများဆုံး 256 အသုံးပြုသူဒေတာ bytes; စိတ်ကြိုက်
polarization: မြို့ပတ်ရထား polarization ကို
antenna အမြတ်: 3dBi
Center ကိုအကြိမ်ရေ: 922.625MHz
Wi-Fi ကို module တစ်ခု
အထောက်အပံ့များ protocol ကို ed: IEEE802.11b / g
ဒေတာနှုန်းထား: 802.11အများဆုံး 11MBps ခ; 802.11ဆအများဆုံး 54MBps
encryption: WEP ကို ​​64-bit နဲ့, WEP 128-bit နဲ့, WPA / WPA2 နဲ့ AES-CCMP
transmission အကွာအဝေး: မိုးလုံလေလုံ 20 54MBps @ မီတာ; ပြင်ပတွင် 50 54MBps @ မီတာ
GPRS module တစ်ခု (optional ကို)
operating အကြိမ်ရေ: EGSM900, GSM1800, GSM850, GSM1900
အထောက်အပံ့များ protocol ကို ed: သည် TCP, UDP ကို, သည် HTTP, FTP ကို, SMTP, POP3
SIM ကဒ်: SIM ကဒ်ကို interface (1.8/3V ကို), ကဒ် access ကိုထောက်လှမ်း
ဆက်သွယ်ရေးလုံခြုံရေး: GSM / GPRS စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်း, encryption ကို algorithms, ထောက်ခံဖွယ်ရှိနေသည်
ဘားကုဒ်အင်ဂျင်ကို (optional ကို)
အာရုံခံကိရိယာစကင်ဖတ်ဖို့: 752X480 pixels ကို, CMOS sensor ကို
focal length: 17.8cm SF = 11.4cm SR =
motion သည်းခံစိတ်:4လက်မ / sec.
စကင်ဖတ်ဖို့ထောင့်: ± 40 °
scan mode ကို: ခလုတ် mode ကို, ကြားဖြတ် mode ကို
ambient အလင်းလိုက်လျောညီထွေ: အပြည့်အဝနေရောင်ခြည်မှစုစုပေါင်းသည်မှောင်မိုက် (100,000 lux)
one-Dimensional symbologies: Code39, Code128, Codabar, UPC, Ean, ကြားညှပ်2၏ 5, RSS ကို, Code93, Codeblock စသည်တို့ကို.
Two-Dimensional ကုဒ်: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, Datamatrix, QRCode, Aztec, AztecMesa, Code49, UCCComposite စသည်တို့ကို.
screen Keyboard ကို Speakers ဆိပ်ကမ်းအယ်လ်အီးဒီ
LCD မျက်နှာပြင်: 2.8 လက်မအရောင် LCD ကို, စက်မှုဇုန်တန်းထိဖန်သားပြင်, ပြောင်လက်တောက်ပသောအဖြူရောင်နောက်ခံအလင်း, နောက်ခံအလင်းတောက်ပမှုကိုချိန်ညှိ, 240× 320 resolution နဲ့, color display ပါ
ထိတွေ့မျက်နှာပြင်: ခံနိုင်ရည်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်, တံ, built-in သိုလှောင်မှုကလောင် slot က
keyboard ကို: multi-multiplexing သော့, key ကိုဘဝ 300,000 ကြိမ်, အပြာနဲ့ LED backlit ကီးဘုတ်
နာယက: built-in 0.5W မိုနိုစပီကာ
indicator: ကွန်ယက်ကိုညွှန်ပြချက် (စိမ်းလန်းသော), ပါဝါ status ကိုညွှန်ပြချက် (အနီေရာင်)
internal တိုးချဲ့: MicroSD / TF ကဒ်တိုးချဲ့ (2GB အထိ), စမတ် IC ကဒ် interface ကို, PSAM ကဒ် encryption ကိုကဒ် interface ကို
ပြင်ပဆိပ်ကမ်းများ: RS232 အမှတ်စဉ် port ကို (အမှတ်စဉ်ဆိပ်ကမ်းကိုပြင်ပတိုးချဲ့ devices တွေကိုထောက်ခံပါတယ်), USB port ကို, ပါဝါကို input ကို port ကို
Operating အပူချိန်: -10℃ ~ + 55 ℃ (+14℉ ~ + 131 ℉)
သိုလှောင်ခြင်းအပူချိန်: -20℃ ~ + 70 ℃ (-4℉ ~ + 158 ℉)
စိုစွတ်ခြင်း: 5%RH အ ~ 95% RH အ (Non-condensing)
အိုင်ပီ rating: IP54
စမ်းသပ်မှု drop: 0.5ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိဘဲကွန်ကရစ်-10 ကြိမ်ပေါ်သို့ M ကတစ်စက်
anti-ထိတ်လန့်: GB ကို / T2423.10-2008 / IEC60068-2-6: 1995 အရှိန် 4.9m / S2, operating အကြိမ်ရေ 5-100Hz drive ကိုလွှဲခွင် (အထွတ်အထိပ်မီလီမီတာ) 25/f (=5~ 10Hz, f), 250/F2 (f = 10 ~ 100Hz)
ပစ္စည်းများ: ဘက်ထရီ, ပါဝါအဒက်, ဒေတာကေဘယ်လ်ကြိုး / charging cable ကို, ထိတွေ့ကလောင်, လက်ကောက်ဝတ်သိုင်းကြိုး, ပျော့ထမ်းကိစ္စတွင်, ဘက်ထရီအားသွင်း (optional ကို)
Invengo XC2901-FUF handheld UHF reader isamulti-functional handheld terminals, unique 32-bit embedded operating system kernel and standard C# language programming tools, to provide users with open and friendly platform for secondary development. Windows CE5.0 operating system, to integrate various system driver (wireless transmission module, the expansion of function module), run the. Net programs,Java program application. Can be used alone, also can be used as the server/client, coordinate with other equipment. In livestock farming, distribution, supervision, tracking traceability applications, XC2901-FUF Handheld Reader provides fast, efficient two-dimensional code reading animal ear tag information, print related badges, and wirelessly transmitted to the data server. Supports two-dimensional code ear tags can also be read UHF animal ear tags and other types of tags, reading speed, အကွာအဝေး, anti tag dirty and broken, high safe, effectively improve work efficiency. The XC2901-FUF Handheld Reader can be widely used in animal husbandry and aquaculture, အစားအစာ traceability, security management, သိုလှောင်, ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု,library management, mobile police, property management, supply chain management, production data collection,စသည်တို့ကို.
The handheld UHF reader size is 165×76×59mm, weighing less than 460g, easily grasp, စစ်ဆင်ရေး, can be carried inapocket is put in the clothes. In the aspect of structure on the principle of human body engineering design, feel comfortable, use foralong time also won't feel particularly tired.
prev: Long ကလက်ကိုင်နှင့်အတူလှိုင်းနှုန်းသည် UHF Long-range ကိုမဲရေတွက် Reader ကို, လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Handheld သိုလှောင်ဘလူးတုသ် Reader ကို, Dustproof နှင့်ရေစိုခံ
နောက်တစ်ခု: UZK101 စီးရီး Long ကအဝေးသင်လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Tag ကို Wiegand Reader ကို
Invengo XC-RF807 4-ရုပ်သံလိုင်းလှိုင်းနှုန်းသည် UHF Reader ကို Fixed, ပံ့ပိုးမှုက ISO 18000-6C / က ISO 18000-6B
4-Split ကို R2000 လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Reader ကို Fixed ရုပ်သံလိုင်း, 4-လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Reader ကို Fixed ရုပ်သံလိုင်း